ထိုနေ့၏ကောင်းသောအပေးအယူ - မသေဆုံးမီ Strand တွင်ယူရိုအနည်းငယ်ကိုသိမ်းဆည်းပါ - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » TECH & Telecom »ထိုနေ့၏ကောင်းသောအပေးအယူ - မသေဆုံးမီ Death Stranding တွင်ယူရိုအနည်းငယ်ကိုသိမ်းဆည်းပါ
ထိုနေ့၏ကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်: Death Stranding တွင်ယူရိုအနည်းငယ်ကိုသိမ်းဆည်းခြင်းမပြုမီသိမ်းထားပါ
il ya Heures 20
- Tech မှ
Amazon တွင်ယနေ့ Death Stranding ကိုကြိုတင်မှာယူလျှင်သင်သည် D-Day တွင်ကစားရန် 21% လျှော့စျေးတစ်ခုကိုရရှိသည်။
နေ့တိုင်းအရေးအသားသင်တို့အတွက်ကြောင့်ငါတို့သည်အယ်ဒီတာအဖွဲ့လိုင်းနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိပါတယ်ရသော web ပေါ်မှာပြောက်ကောင်းတစ်ဦးအစီအစဉ်, ရွေးချယ်သည်။
Death Stranding သည် Metal Gear Solid ၏ဒဏ္myာရီဆန်ဆန်လှပသောကျော်ကြားသော Hideo Kojima ၏ဂိမ်းအသစ်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ကစားခဲ့ပါတယ် ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သေချာသည့်အချက်တစ်ခုမှာကစားပွဲသည်ကစားသမားများကိုဝေငှမည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်သဘောထားတစုံတရာရှိသူကိုကျွန်ုပ်တို့မမြင်နိုင်ပါ။ ဒီတစ်ကိုယ်တော်စွန့်စားမှုကို PlayStation 8 နှင့် PlayStation 2019 Pro တို့တွင်4နိုဝင်ဘာလ4သီးသန့်အဖြစ်စောစောစီးစီးရှာဖွေတွေ့ရှိရမည်။
အကယ်၍ သင်သည်ဂိမ်းကိုသင်နှစ်သက်သည်၊ မုန်းသည်ကိုသင်သိလိုလျှင်၊ ယခုအချိန်သည် Death Stranding ကိုစျေးလျှော့။ ကြိုတင်မှာယူရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ 69,99 ယူရိုအစား၊ ယခု၎င်းကိုရနိုင်သည် အမေဇုံအပေါ် 54,99 ယူရို.
ထုတ်ဝေမှု "Amazon သီးသန့်" မတူညီသောအိတ်နှင့်အတူတူပင်စျေးနှုန်းမှာရရှိနိုင်ပါသည်။
PS4 မှ Death Stranding ၏ "Exclusive Amazon" ထုတ်ဝေမှု။
Death Stranding, ဘယ်လိုဂိမ်းမျိုးလဲ။
Death Stranding သည် Kojima ထုတ်လုပ်ရေးစတူဒီယို၏ပထမဆုံးဂိမ်းဖြစ်သည်။ Apocalyptic အခြေအနေမှာထူးဆန်းတဲ့ကျိန်စာသင့်နေတဲ့ကလေးတစ်ယောက်ပါ။ နက်နဲသောအရာတခုကိုမဖျက်ဆီးလိုသောဤတစ်ကိုယ်တော်စွန့်စားခန်းတွင်မတူညီသောဒေသများကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်သင်အမေရိကန်ကိုကယ်တင်ရမည်။
ငါတို့မှာ Death Stranding ကိုလက်ကိုင်ထားဖို့အခွင့်အရေးရတယ်။ ငါတို့ကဒီ Kojima ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအသစ်ကိုကံကောင်းတဲ့သူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်။ အထူးသဖြင့် PS4 Pro တွင် Horizon Zero Dawn ၏အင်ဂျင်ကြောင့်၎င်းသည်တကယ့်ပါးရိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအခါအရေးအသားရှားပါးထောက်လှမ်းရေး၏: "Death Stranding သည်ရင့်ကျက်သောရင့်ကျက်သောကမ္ဘာကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ ၎င်းသည်တည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်ပြီးရှုပ်ထွေးသောကြံစည်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်သည်။ သို့သော်လူသား၏အခြေခံအကြောင်းရင်းနှင့်၎င်းကိုအာဟာရဖြစ်စေသည့်ဆက်သွယ်မှုများ၌အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ Maxime Claudel ကအထူးပြုကော်လံတွင်ပြောကြားသည်။ သင်ရှာနိုင်သည် ဒီလိပ်စာမှာမိမိစမ်းသပ်မှု.
Numerama တွင်ဖတ်ရန်: PS4 Pro တွင်သေခြင်းစစ်ခြင်းစမ်းသပ်မှု - Hideo Kojima သည်လက်ရာမြောက်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်အတွက်လင့်များဆက်နွယ်လျက်ရှိသည်: သင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရှာတွေ့လျှင်, အသေးငယ်တဲ့ကော်မရှင်ဝင်ငွေ။ ဒီမှာသင်အရာအားလုံးကိုကရှင်းပြသည်.
Michel Cymes - စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကိုဘယ်လိုရှာမလဲ။ - ဗီဒီယို